Ragaa Sagalee Taakkalaa fi Shimallis reeffis Hacaaluu akka Finfinneetti deebi’u gaafatan – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioRagaa Sagalee Taakkalaa fi Shimallis reeffis Hacaaluu akka Finfinneetti deebi’u gaafatan
“Harra magaalaa DEMBIDOLLOtti dargagoo tokka raayya ittisa biyyaan du’e karaarra reffisa cisaa ture”
Yeroo Jawar fi hidhamtoota isa waliin jiran irratti murteessan, akka ummatni tarkaanfii hin fudhanneef ummata rifachiisanii akka manatti galu gochuuf karoorri isaan baasan lakkoofsa namoota COVID19 qabamanii fi du’an akka malee olkaasuuf deemu.
Gama biraatiin haaluma amma godhaa jiraniin akka malee Qeerroo hidhanii akka abdii kutatu gochuuf karoora baafatan. Kuni yeroo murtaa’eef qofa kan godhuuf deeman.
Haala kanaan akka itti fufuu hin dandeenye nu caala isaantu beeka.
Kanaafuu ummatni keenya adeemsa isaanii hubatee qabsoo godhaa jiru jabeessee itti fufuu qaba.
Akka dhagayaa jirrutti aadde Xayyibaa Hasanis hidhaa ofirratti eegaa kan jirtu yoo ta’u, “jiruu akkanaa keessa jiraachuu irra daa’ima reefu dhalatte waliin yoon hidhame irra naa wayya” yaada jedhu qabaachuu isiiti.
Beellamni Jawar har’a saa’aa 4 tti ture. Faanaan garuu saa’aa 15 dura waan saa’aa 4tti ta’uuf deemu gabaase. Jawar qabsoo Qeerroon gootu qofatu mana hidhaatii isa baasuu dandaya.
Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee hogganoonni ittifaman miseensa ykn hoggana paartii Badhaadhinaa turanii? Paartiin Badhaadhinaa damee Oromiyaa miseensa koree jiddugaleessaa Paartichaa kan biyyoolessaa ittisuu danda’aa?
miseensa koree jiddugaleessaa paartii Badhaadhinaa kan ta’an Obbo Awwaluu Abdii “Miseensa akka hin ta’iin nuti quba hin qabnu” jedhu.
Obbo Awwaluun Obbo Lammaan yaada isaanii kana hojimaataa dhaabaa hordofuun karaa keessaa kaasanii yaada isaanii osoo hin ibsatiin miidiyaatti bahanii dubbachuun dogoggora ture jedhu. Booda bakka hogganoonni buleeyyiin jiranitti marii bal’aa dhimmicharratti taasifameen garaagarummaa yaadaa akka qaban ibsatanii, sana bahanii miidiyaatti dubbachuun ‘dogoggora ta’uu amananii, dhiifamallee gaafatanii’ akka itti fufame dubbatu.
Dhimma kanaafi dhimmoota kaan irrattis yaada obbo Lammaa Magarsaa dhagahuuf yaaliin isaan aragchuuf goone hanga ammaatti hin milkoofne.
Oduu Walgahii Bahir Daar
Warra: “Nuu fi Shimallis Abdiisaa keessaa dafii tokko filadhu! Ariita moo hin ariitu?”
Abiy: “Filannoo koo isinuu beektu. Waan hundumaa argaa jirtu. Waggaa lamaan har’aa Lammaa fi Jawar akka itti laalamaa turan beektu mitii? Har’a jara lachuu akkan godhe gartan mitii? Shimallis maal qabdi? Yoo barbaaddan ari’uu qofa miti, nan hidha. Hojii daqiiqaa tokkooti. Garuu ammuma jedhee amma yoon dhahe waa na jalaa balleessa. Ajaja Bahir Daar irraa fudhate hojiirra oolche naan jedhama. Kanaafuu xiqqoo shawwaduu qabna waan taheef yeroo naa kennaa”